Yokwakha yaseGrisi uyaxebuka Futhi Cutting ...
cambered ekhethekile ezimise wokucwebezelisa umshini uhlobo olusha futhi esebenza kahle izinkuni ebusweni processing equipment.The umshini usebenzisa ephezulu ekupheleni amazwe imishini ezihlakaniphile ukuthuthukisa ngokuphelele ukunemba izinkuni ibhodi wokucwebezelisa, ikakhulukazi primer wokucwebezelisa ngokunemba, okuyinto kakhulu banconywa amakhasimende aphezulu.
Phakathi nayo yonke inqubo kusukela ekuqaleni kuze kube sekupheleni kokumiswa, isithando somlilo sigcwele umusi oshubile oshubile okushisa okuphezulu kakhulu kuwo kungu-150 ℃. Lokhu kuqinisekisa ukuthi indawo yezinkuni ayiqhekeki, ngasikhathi sinye, inyusa umswakama ongaphezulu wezinkuni, inciphisa umehluko womswakama phakathi kwezinkuni ngaphakathi nangaphandle. Ngaphezu kwalokho, ngenxa yezinga eliphezulu lokushisa kwe-steam, izinga lokushisa lomgogodla wezinkuni lingakhuphuka ngokushesha. Kuthatha amahora angama-20 kuphela ku-log ka-15cm ubukhulu ukuthola ukushisa komgogodla wezinkuni ku-80 ℃, okudala izimo ezihamba phambili zokomiswa kwento yokhuni.
Sincoma ngokuyinhloko imodeli yethu yakamuva yomshini wokuxubha ongahlanzekile, imodeli yokushayela kabili. Uma uqhathanisa nomshini wokuphotha izinkuni zokuphotha, lezi zinzuzo zomshini ukuthi izingodo ezincane zobubanzi azinankinga zokuzixebula futhi kulula ukuzisebenzisa nokuhluza isivinini kuyashesha.
Umugqa wokukhiqiza ogcwele we-othomathikhi wesivinini esisheshayo usetshenziselwa ubukhulu obuhlukile bokuxhunywa kwezinkuni nokucubungula okuhlobene. Udinga umuntu oyedwa ozosebenza. Igcina izindleko zabasebenzi eziningi. Ngasikhathi sinye, akunqamuki ukukhiqiza, ngakho-ke umphumela ukhuphuke kakhulu. Ngaphezu kwalokho, inani lephutha liphansi kakhulu.
Lo mshini usebenzisa i-Siemens servo motor, uhlelo lokulawula oluzenzakalelayo lwe-PLC. Ukusebenza kuyashelela futhi kuyasebenza futhi kunembile kakhulu. Kusetshenziselwa ukusika imiphetho yazo zonke izinhlobo zamabhodi afana ne-HPL, ibhodi le-foam le-PVC, i-plywood ne-mdf namanye amabhodi ezinkuni.
Usayizi ojwayelekile wokusika kwe-longitudinal: 915-1220mm (eguquguqukayo), ukusika okuguqukayo okungu-1830-2440mm (okuguquguqukayo) .Onye osayizi abenziwe ngezifiso bakulungele ukubhuka.
Umshini ulawulwa ngohlelo lwe-CNC, okulula, okulula futhi okunokwethenjelwa ukusebenza, nge-automation ephezulu.
Sisebenzisa indlela yokulingisa ukukhiqiza ifreyimu yomzimba.Uzimele ohlangothini usebenzisa ipuleti likazwelonke elijwayelekile lensimbi kabili kanye nemigoqo yangaphakathi yokufaka ulayini, eqinisekisa ngokuphelele ukuzinza komshini.Iqinisekisa ukuthi akukho vibration, akukho deformation.
Log loging debarker is used to peeling off the log skin and make the raw log to be round, after debarking it will be easy for the peeling lathes to peel and the veneer thickness will be even without great difference, also can increase the peeling pehes working impilo.